Photography » အဏုစိတ်ရသ	15
Posted by warsojuly on Mar 19, 2016 in Photography | 15 comments
Hoverfly & Sakura
Arkar Zaw Hein has written4post in this Website..
Genius are not Always A-Grade
View all posts by warsojuly →	Blog
kai says: ဆကူရာပုံတော့ ဆန်းလို့ကြိုက်တယ်..။
ဘယ်နှာ့… ဘီးမျက်လုံးပေါ်တောင်.. ၀တ်မှုံတွေကြွေလို့…။
warsojuly says: တစ်ခါတစ်လေလည်း..အဲဒီလို..ကံစွပ်ပြီး.ရတတ်တာ..အဟီး.
ခင်ဇော် says: အတော် မိုက်တယ် လို့ပဲ ပြောနိုင်တော့တယ် ဆရာ..
warsojuly says: ကျေးဇူးပါ..ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ..
ဦးကြောင်ကြီး says: ဝါဆိုဂျူ လိုင်
warsojuly says: မဟုတ်တော့ဘူးလားဗျ…..
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကြိုက်ဒယ် ခိုက်ဒယ် မိုက်ဒယ်
warsojuly says: မတောက်တခေါက်လေးပါခင်ဗျ..
Ma Ma says: ဆရာကြီးတစ်ပါးပါပေတကားးးးးးး
warsojuly says: ဆရာကြီးမဟုတ်ရပါကြောင်း..
Foreign Resident says: ဓါတ်ပုံ တွေ ကတော့ ရှယ်ဘဲ ။
တဖြေးဖြေး နှင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှက်လာပြီ ။
DSLR ကိုင်လာတာဘဲ အိုသေတော့မယ် ၊
အခုထက်ထိ Auto နှင့်ဘဲ ရိုက်တတ်သေးတယ် ။
ဒါတောင် မရှက် မကြောက် Full Frame ( Canon 5Ds R ) ဝယ်ဖို့ ၊
ဈေးမေးလိုက် သွားကြည့်လိုက် နှင့် စိတ်ကူးယဉ်နေမိသေးတယ် ။
ဒီလို ဓါတ်ပုံမျိုးတွေ မြင်ရတာ ၊ ရှက်တောင် ရှက်လာပြီ ။
warsojuly says: အဲဒီလောက်ကြီးတော့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ..
P Mode,AV Mode,TV Modeတို့နဲ့စမ်းရိုက်ကြည့်ပါလား..
uncle gyi says: ဓါတ်ပုံကိုဖလင်ခေတ်ကတည်းကစရိုက်လာတာအပျော်တမ်းမှတ်တမ်းအဆင့်
Thint Aye Yeik says: အသက်ရှူဖို့တောင် မေ့သွားတယ်
ပုံတွေကို တအံ့တသြ ငေးကြည့်မိ. . .
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ပုံလေးတွေတော်တော်ကောင်း…ရွာထဲလည်းဓါတ်သေဆြာတွေမနည်းဘူးဗျ